Centara Inokoka Vashanyi Kuzoona iyo "Yakanyanya Kufamba Mukufamba" muIndian Ocean mu2019
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Centara Inokoka Vashanyi Kuzoona iyo "Yakanyanya Kufamba Mukufamba" muIndian Ocean mu2019
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • Resorts • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Centara Hotels & Resorts, boka rinotungamira rekugamuchira vaeni muThailand, riri kukoka vashanyi kuti vaone "Yakanyanya Kufamba Kufamba" muIndian Ocean mu2019, nesarudzo yenzvimbo nhatu dzinoshamisira muSri Lanka neMaldives.
Yega Lonely Planet Yakanakisa mune Yekufambisa gwara, mutengesi wepagore anotora nzvimbo dzepasi rose dzegore rinotevera, akasarudza Sri Lanka senyika yepamusoro yepasi rose ye2019 uye Maldives seimwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo.
Iye mutungamiri akarumbidza Sri Lanka ne "musanganiswa wezvitendero netsika, tembere dzayo dzisingagumi, mhuka dzesango dzakapfuma uye dzinowanikwa, nzvimbo yayo iri kukura pamusoro pevhu nevanhu vayo vanopesana nematambudziko ese nekutambirwa kwavo uye nehukama".
Yakavakirwa pamunda wepakati pakati peBentota Rwizi neIndian Ocean, Centara Ceysands Resort & Spa inoratidza hunhu hwakanaka kwazvo hweSri Lanka, kusanganisira yayo isingagumi yekugamuchira vaeni, chikafu chinonaka uye yakawanda mikana yemitambo yemvura. Nesarudzo yemakamuri akapamhama, imwe neimwe iine balcony yakatarisana nemasango akasvibira kana gungwa rine azure, ino idyllic upscale resort inopa hwaro hwakakwana hwechero ruzivo rweSri Lankan.
Pasi pekusimudzira kwe "Meal Plan Upgrades", vashanyi vanogadzirira kugara-husiku huviri pamberi pa 30 Chikumi 2019 vanozosimudzira yekuwedzera kune inotevera chirongwa chekudya uye yemahara Wi-Fi. Semuenzaniso, vashanyi vanogadzira hafu-bhodhi yekugara vanozongo gadzirisirwa kuAll-Inclusive Package.
CLICK HERE kune rumwe ruzivo uye kuchengetedza.
Lonely Planet akataura kuti zviitiko zvitsva "zviri kuunza vashanyi padhuze nechero zvingave zvisiri nyore tsika yeMaldivian". Centara inopa mibairo-yekuhwina emahotera emahotera muMaldives ayo ari kuita kuti nyika iwanikwe kupfuura nakare kose, iine yakawanda yakawanda yezvakaitika zvekupisa uye zviitiko.
Centara Grand Island Resort & Spa chitsuwa chepamusoro chinodzokera nemahombekombe egungwa uye pamusoro pemvura dzimba pamwe nepfuma yezvivakwa zvemarudzi ese ekugara, kubva pazororo revakaroora kusvika kumazororo emhuri akazara. Yakavakirwa munzvimbo inoyevedza yeSouth Ari Atoll, iyi nyeredzi shanu-yekutandarira inovimbisa rakadzikama runako rwepanyama nemahombekombe ane mumvuri uye gungwa rinopenya.
Centara Ras Fushi Resort & Spa. Zve hi-res mifananidzo tinya pano.
Neimwe nzira, Centara Ras Fushi Resort & Spa inzvimbo inonakidza yevakuru-chete inzvimbo yakamisikidzwa pachiwi chakajeka maminetsi makumi maviri kubva kuMalé International Airport nechikepe. Izvi zvinoita kuti iwanikwe nyore kwete chete kune marefu anotonhorera ezororo, asiwo neyemapfupi mabhureki - yekupedzisira vhiki yekudzokera. Vaenzi vanogona kusarudza imba pamhenderekedzo yegungwa kana pamusoro petsanga, kutamba mugungwa, kuzorora mu spa kana kunakidzwa mukudyira kwepasirese.
Kuwedzera yakatonyanya kukosha kuMaldives, Centara irikukoka vaenzi kuti vagare muparadhiso kweanosvika makumi matatu muzana
zvishoma mu2019! Bhuka sarudzo yekugara (kumahombekombe egungwa kana pamusoro pemvura) pane chero nzvimbo yekutandarira pamberi pa 30 Chikumi 2019, yekugara pamberi pa 23 Zvita 2019, uye unakirwe ne20% kubviswa uye mahara kufambiswa kubva uye kuenda kuMalé International Airport. Nhengo dzeCentaraThe1 dzichafarira imwe yekuwedzera 10% kubva!
CLICK HERE kubhuka yako yekuwedzera-kuwedzerwa kugara kuCentara Grand Island Resort & Spa, kana CLICK HERE kunyorera yako Maldivian kutiza kuCentara's Ras Fushi Resort & Spa.
Vashanyi vanogona kunyange kusanganisa idzi mbiri nzvimbo dzinoyevedza neviri-nzvimbo dzekugara muSri Lanka neMaldives neCentara. Ndege dzinoverengeka dzinopa nendege dzakananga pakati peColombo neMalé, zvichibvumira vashanyi kuti vanyure mune runako rweIndian Ocean. Kubhuka kwakananga neCentara kunovimbisawo akanakisa mahotera mitengo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Centara Mahotera & Resorts uye kuisira ako Akanakisa muRwendo kutizira kuIndian Ocean mu2019, ndokumbira ushanyire www.centarahotelsorts.com.